Maxaad Wadaadada celibate? – 2kalluunka
Home / Church / Sacraments / Amarada Quduuska ah / Maxaad Wadaadada celibate?
Waa ku dhowaad funny, laakiin hadal Ciise on guurka ka dhigay qaar ka mid ah dadka taabacsan inay soo gabagabeyn waxaa u roon, waayo, mid la guursadaaba ma ahaa. Ciise isku raacay iyagii kula qayb, caddaysanaya:
"Aan Dadka oo dhammu ereygan ma heli karo, laakiin kaliya kuwa in kuwii la siiyey. Waayo, waxaa jira bohommo sidaas kaga dhalashada, oo waxaa jira bohommo kuwaas oo la dhigay bohommo rag, oo waxaa jira bohommo isu dhufaanay aawadood oo ah boqortooyada jannada. Isagu waa kan kara inaad hesho, ha aqbalo. " (Matthew 19:11-12)
In nolosha celibate "waxaa la siiyaa,"Sida Sayidku wuxuu iyada soo gelin, shaqsiyaadka gaar ah oo muujinaysa waxaa iska leh call in ay wasaaradda.
Rasuul Bawlos wuxuu ku talinayaa Celibacy sidoo cidduu u aqbali karin.
"Waxaan jeclaan lahaa in dhamaan ahaayeen sida aniga qudhayduna waxaan idiin, ... Si aan guursan iyo carmallada, waxaan idinku leeyahay in ay si fiican yahay si ay u sii hal sidaan yeelo " (1 Korintos. 7:7, 8). Wuxuu ayaa sheegay, "Waxaan rabnaa in aad xor ka welwelidda. Ninka la qabin waa ka welwelina ku saabsan arrimaha Rabbiga, sida in ay ka farxiyaan Rabbiga; laakiin ninka guursaday waa ka welwelina arrimaha adduun, sida loo afadiisa uga farxin, iyo danaha uu kala qaybsan yihiin. " (7:32-34)
Ma aha oo kaliya Paul ma ansixin of Celibacy, uu si dhab ah u arkaa in ay quman in guurka shakhsiyaadka qaarkood. "Waxa uu kii guursadaa uu doonanayd si wanaagsan ayuu falaa,"Ayuu yiri; "Iyo kii ka guurka reebtooma samayn doonaa si fiican" (7:38; cf. 7:7, kor ku xusay).
Sidoo kale waxay warqadaha ku Rasuulka waxaan ka heli tilmaamay, in Order of Widows.
Taxay qaar ka mid ah tilmaamaha gelitaanka amarka, tusaale ahaan, Bawlos wuxuu u qoray in uu Letter First in Timothy:
"Maamuus carmallada kuwa carmallada dhabta ah… Iyadu waa kii naag carmal ah oo dhab ah, oo waxaa oo dhan keligiis ayuu hadhay, ayaa waxay rajo ku leedahay Ilaah iyo sii habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada; iyadu halka kan is-dambi xitaa halka ay ku nooshahay. this amartaa, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in aan canaanan" (5:3, 5-7; xooga ku daray)
Waxa ay ahayd waajib ku ah carmallada la daahiriyeyna, ka dibna, si ay u tukadaan si joogto ah iyo sidoo kale in ay ku noolaadaan noloshooda qofku xeerarka set. Paul ayaa sheegay:
"Ha la qoro carmal lagu qoro, haddii iyadu ma aha wax ka yar lixdan sano jir, isagoo naag ninkeeda ka mid ah; 10 oo iyana waa inay si fiican u la soo caddeynaya iyada camalka wanaagsan, sida mid ka mid ah ayaa soo koriyey wiilashii, hoteelada muujiyay, Kuwiisa quduuska ah cagahooda ku maydhay, kuwii dhibaataysnaa u gargaartay, iyo nafteeda u hibeeyeen ilaa ay wanaagsan si kasta samaynaya." (5:9-10; xooga ku daray)
Siddo amarka la rasmi ah by duudduuban (v. 9) iyo, Intaa waxaa dheer in Salaadda, carmallada ayaa la filayaa in ay sameeyaan falal dhawrsashada (v. 10). Ugu dambeyntii, Paul xaqiijisay in ay dhab u qaataan nidarradeedii of isdhawra, qoraal, "Laakiin waxay diidaan inay qoraan carmallada dhallintayar; waayo, markay qooqaan ayay Masiix waxay doonayaan inay guursadaan, iyo si ay u sugnaaday xisaab isagoo ku xadgudbay Ballankooda ugu horeysay " (5:11-12; xooga ku daray).
Kuwani haweenka celibate, heegan u ah nolosha salaadda iyo zakada, sameeyey la daahiriyeyna si ugu horeeyay ee diinta dhaddig; kuwanu waxay ahaayeen sooro ugu horeysay.
dhaleecayn The Church ee ku saabsan arrintan inta badan tilmaan in nin xaas ah ayaa loo ogol yahay si ay u noqdaan hoggaamiyayaasha kiniisadda iyo presbyters in Church Rasuullada, iyo in xitaa Saint Peter wuxuu qabay naag a (arki Bawlos Letter First in Timothy 3:2; uu Warqad ku Titus 1:6; iyo Matthew 8:14).1
Church The dhaba qiray, in khasab ah Celibacy had iyo jeer ma ahaa xeerka. Celibacy, dhab ahaan, ma aha a Cilmigaygu of Church ah, laakiin keliya ah anshaxa; iyo sida oo kale waxa ay weli u furan tahay in la beddelo-in la soo rogay ama ka noqday-si loo waafajiyo baahida waqtiga.
Si kastaba ha ahaatee, in kastoo aan weli khasab ah, Church Rasuullada Celibacy si cad u doortay sheekh ah (arki Matthew 19:12 iyo Letter The First Corinthians ee 7:32, 38).
In Paul doorbiday kiniisadda in ay guursan la ogaan laga yaabaa in talo uu Timothy in "Askari no [Masiixa] on adeeg uu murgiyey raad rayid ah, tan iyo markii uu hadafkoodu yahay in ay ka dhergin kan isaga diiwaan " (Bawlos Letter labaad si Timothy 2:4 iyo Letter The First Corinthians ee 7:32-34).
In kasta oo xaqiiqda ah in rag is qaba ayaa la dhigey wadaadada ee qarniyadii ugu horeeyay, Oo weliba, nin guursan ayaa laga mamnuucay in u guursanayeen oo marka ay soo amreen, iyo wadaaddadii laga dhintay waxay ahaayeen in ay guursato ka.2 The Church ee maamuustaan ​​joogto ah Celibacy diinta waa si fiican u qodobaysan ka maalmood iyada horeeya weeraryahanka. Ilaa sannadkii la soo 177, tusaale ahaan, qoraaga Christian Athenagoras sheegay, "Waxaad lahaa, dhab ahaan, heli naga mid ah dad badan oo, labadaba ragga iyo dumarka, kuwaas oo ku koray cimri guursan, in rajada ah in uu u dhaw in Ilaah " (Qirasho Masiixiyiinta 33).
Anti-Catholics ayaa si qaldan oo cay Paul ee kuwa "yaa naga fogeeyo guurka" (Letter First in Timothy 4:3) si ay u weeraraan mawqifka Church ee Celibacy.
Dhab ahaantii, In kastoo, Paul waxaa halkan ku tilmaamayaa in Gnostiga ah, kuwaas oo arkay dunida jirka, oo ay ku jiraan jacaylka guurka iyo uurka, sida wax shar leh ka muuqo, sababtoo ah waxay la aaminsan yahay, waxaa laga abuuray by ilaah xun. Si lid ku ah, Church Catholic, fog tahay in uu ka soo horjeeda guurka, esteems Quduuska Matrimony sida karaamada iyo dawlad quduus ka dhigay. Wadaadada aadan guur ha ka tegin, oo sidaas daraaddeed, maxaa yeelay, waxay u maleyso inay tahay “xun,” laakiin maxaa yeelay, iyagu waxay ogaan waxaa inoo wanaagsan iyo rabitaan in la siiyo ilaa waxan wanaagsan in ruux ka mid ah jacaylka waayo, Ilaah.
Celibacy "aawadood oo ah boqortooyada jannada" (Matthew 19:12) waa wanaagsan inuu Ilaah u ahaado waxa ay farta ku fiiqay in habka Southampton jannada ku nool yihiin (arki Matthew 22:30).
In The Kitaabka Muujintii waxaan aragnaa in wadaaddada aamin Ilaah la siin doonaa xaaladda qaali ah in Jannada. "Waa kuwan,"Ayuu qoray Saint John, "Kuwaasoo aan isu naagaha ku nijaasoobin, waayo, iyagu waa daahir noqdaan; waa kuwan Wanka u raaca meel kasta oo uu u dhaco; kuwaas oo lagu soo furtay Dadka sida midhaha ugu horreeya, waayo, Ilaah iyo Wanka, iyo afkooda been lama helin, waayo, iyagu waa nadiifsan " (14:4-5).
Waxaan ognahay Peter ahaa guursaday, maxaa yeelay sheekada Ehelka Injiil wuxuu ku bogsiiyey ee uu soddoh (arki Mark 1:29-31, et al.). Waxa xiiso leh in la ogaado, Si kastaba ha ahaatee, in uu naagtiisa laguma sheegin in sheekada, taasoo keentay culimada qaar in ay ku tirinnaa waxay ku halligmeen hor Butros soo galay wasaarada. ↩
Waxaa weli dhaqanka in Umaad Eastern kuwa galaan aawadeed wadaadnimadii waa in gobolka la qabin in guur la'aato. Intaas waxaa sii dheer, halka duwidda u furan yahay nin guursan Bari, waxay u qalmin episcopacy ah. kiniisadda Eastern la doortay si gaar ah ka madaxda sare ee suufiyadoodii celibate. gadhwadeen, ma dhammaantiis waa la kahdo of wadaad in Umaad Laatiin ah inay guursato. Tiro yar oo hore Lutheran iyo wasiir Anglican, kuwaas oo guursaday ka hor dib u heshiisiinta la iimaanka Catholic, lagu siiyay wakiilnimada gaar ah si ay ugu adeegaan hawsha wadaadnimada. ↩